समाचार Archives | Page 263 of 287 |
यी हुन् माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि र प्रदेश सभा उमेदवार
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार १३:१८ November 2, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अन्तिम सूची तयार गरेको छ । कम्युनिष्ट गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादीले प्राप्त गरेका क्षेत्रमा उमेदवार टुंगो लगाएको लगाएको हो । आगामी मंसिर १० मा ३२ जिल्ला र मंसिर…
एएफसी यू–१९ मा आज नेपाल र बहराईन भिड्दै , कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार ११:०३ November 2, 2017 ताजा खबरFeatured, खेलकुद, समाचार
कार्तिक १६ । एएफसी अण्डर नाईन्टिन फुटबल च्याम्पियनसिप छनोट चरणको दोस्रो खेलमा आज नेपालले बहराईनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । खेल नेपाली समयअनुसार आज दिउसो ४ बजेर ४५ मिनेटमा हुनेछ । यो खेलको प्रतक्ष्य प्रसारण हामी यसै वेबसाइट मार्फत गर्नेछौं । समूह…
गोली चलाउने भारतीय सुटरलाइ ५१ राउन्ड गोली सहित पक्राउ गर्ने प्रहरी डिएसपी को हुन् ?
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार १०:४८ November 2, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं । बुधबार साँझ कमलपोखरी स्थित हेरिटेज प्लाजा रेष्टुरेन्ट आसपास गोली चलेको आवाज आयो । सुचना पाउनासाथ महानगरी प्रहरी बृत्त कमलपोखरीका डिएसपी कुलदीप चन्दको टोली ‘फलोअफ’ निस्कीयो । केहीसमयमा ५१ राउन्ड गोली सहित दुई भारतीय ‘सुटर’ पक्राउ परे । पक्राउ…
कमलादीमा गोलि हान्ने भारतीय सार्पसुटर, ठूलै घटना गराउन काठमाडौं छिरेको हुन सक्ने आशंका
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार ०९:५५ November 2, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं, १५ कात्तिक । राजधानीको कमलादीस्थित हेरिटेज प्लाजाभित्र बुधबार साँझ गोली चलेको छ । कर्पोरेट कार्यालयहरू रहेको सो प्लाजाभित्र गोली चलेको आवाज सुनिएपछि प्रहरीले खोजतलास गर्दा अटोमेटिक पेस्तोल र ५१ राउन्ड गोलीसहित प्रहरीले दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।…
विवाहको तीन घन्टामै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दुलाहालाई लगाइयो जुत्ताको माला !
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार २२:२८ November 1, 2017 ताजा खबरसमाचार
एजेन्सी । सामान्यतया विवाहपछि प्रायः जोडीको रमाइलो दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ। तर, भारतका एक दुलाहालाई भने नवदुलहीले तीन घण्टामा नै सम्बन्धविच्छेद गरिदिएकी छिन्। लोभी दुलाहाले धेरै दाइजो मागेपछि सिन्दुर हालेको तीन घण्टामै दुलहीले सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को पुरुषसँग विवाह गरेकी हुन्।…
डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य बढ्यो, कति पुग्यो दाम ?
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार २१:२० November 2, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मुल्य बढाएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको भाउ बढेको हो । निगमले पेट्रोलको मुल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा तथा ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँले बढाएको…
१० वर्षीया बालिकाको बलात्कारमा आफ्नै दुई काका दोषी
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार १४:५५ November 1, 2017 ताजा खबरसमाचार
भारतमा १० वर्षीया बालिकाको बलात्कारमा दुईजना पुरुष दोषी रहेको फास्ट ट्र्याक कोर्टले फैसला गरेको छ । बलात्कृत बालिकाले यही अगस्टमा छोरी जन्माएकी थिइन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका दुवै व्यक्ति बालिकाको सहोदर काका हुन् । उनीहरूविरुद्ध बिहीबार अदालतले सजाय सुनाउने…
कोरियाको एक वेब साइटमामा नेपाली नारीका अश्लिल भिडियो छ्यापछ्याप्ति : कसले गर्दैछ यो अपराध ?
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार १४:४३ November 1, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाण्डाै । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा बस्ने बानी कत्तिको छ ? कतै तपाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भिडियो कल वा यस्तै संवादमा देखिने दृश्य रेकर्ड हुनेगरि कुरा गर्नुभएको त छैन ? तपाईका श्रीमान अथवा ब्वाइफ्रेन्ड विदेशमा छन् कि ? कतै…
बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिन प्रचण्डले गरे करोडौँको अफर : सावित्री श्रेष्ठ
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार ११:३४ November 1, 2017 ताजा खबरFeatured, समाचार
२०६९ भदौ ७ गते । ०२५–५६२३७७ नम्बरबाट दिउँसो ४ः२५ मा तारन्तार मोबाइलमा घण्टी बज्यो । ‘हेलो !’ भन्न नपाउँदै धम्कीको भाषा सुरू भइहाल्यो । ‘तपाईँ तुरून्त मलाई भेट्न आउनुस् त ।’ फोन गर्नेले धम्की दिंदै भन्यो । ‘तपाईँको को हो…
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार ११:२६ November 1, 2017 ताजा खबरसमाचार
झापा। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हात्तीको आक्रमणबाट गएराती भद्रपुर–९ का ३७ वर्षीय दुर्गाबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको हो । गाउँमा पसेको जंगली हात्तीलाई लखेट्ने क्रममा कटुवालको मृत्यु भएको हो…
Previous 1 … 262 263 264 … 287 Next